Maxaan ka ogaan karnaa VPS iyo WebHostings GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Markaan dooneyno inaan yeelano degel noo gaar ah, kulligeen waxaan isku aragnaa su'aashan ... maxaan iibsadaa, VPS (Adeegga Gaarka ah ee Khaaska ah), WebHosting ...? Maxay ugu fiican tahay boggeygu oo aan lacag lumin?
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan si cad u qeexno waa:mareeg noocee ah ayaa inaga noqon doonta?
Aniga ayaa ku hadli doona magaca <° Linux (http://desdelinux.net), oo ah degel intabadan macluumaad kahelaya (xilligan), taraafikada aan wali la tixgelin karin (marka la barbar dhigo goob saaxiibtinimo leh sida Artdesktop.com).
Annagu ma nihin degel leh xitaa 1000 booqashooyin qaas ah maalintii, oo caddaynaya in booqashooyinka gaarka ah AAN la mid ahayn aragtida, tusaale ahaan tirakoobka WordPress tirada aragtiyaha ayaa muuqda, laakiin ma ahan tirada booqashooyinka gaarka ah 😉
Sida ku xusan Pressitt.com, markay tahay in la ogaado waxa aynu dooran karno si aynaan lacagteenna u lumin, qiimayaashan oo guud ahaan sax ah (maaddaama ay yihiin kuwo guud) badanaa way naga caawiyaan:
0 - 300 booqashooyin qaas ah maalintii => WebHosting.
300 - 5000 booqashooyin qaas ah maalintii => VPS.
5000 + booqashooyin qaas ah maalintii => Server Gaarka ah.
Boggeena, a Martigelinta Shabakadda Waqtigaan waa ku filan tahay, sababtoo ah ma haysto tiro badan oo booqasho ah weli ... Laakiin ... Waa maxay WebHosting?
Un Martigelinta Shabakadda waa wax iska fudud in la sharaxo oo la fahmo. Waxay si fudud u tahay adeege halka aan ka heli doonno boggeena, MA xakamayn doonno server-kan, kuma lihin mudnaan maamul ee server-ka… waa shirkad / shirkad keliya oo na siisa adeegga daabacaadda degelkeenna adduunka.
Waayahay laakiin, ka dibna Waa maxay VPS?
Un VPS waa a Server Virtual. Waa mashiin kumbuyuutareed ama kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo ku dhex jira server gudaha waddan kale oo adduunka ah, kumbuyuutarkan (kan Virtual-ka ah) waanu ku samayn karnaa wax alla wixii aannu doonno, waanu rakibi karnaa barnaamijyo, waanu u habayn karaa gidaar-dhis, iwm. Waxay u egtahay inaad haysato adeege dhab ah oo internetka ah, oo kaliya qalab yar oo kayar iyo qiimo aad u jaban
... Ma jiraan kaliya VPS oo la shaqeeya GNU / Linux?
También están disponibles VPS la shaqeeya Server Windows, oo si sare looguma talinayo. Waxaa dhacda in taageerada ay alaab-qeybiyeheenna / iibiyuhu na siin karaan, xaaladaha badankood aysan ahayn mid xirfad leh sidii la rabay, waxayna u muuqdaan inay xalliyaan dhibaatooyin badan ama xaalado aan raaxo lahayn (si kasta oo ay u fudud yihiinba) si fudud: «Waa inaan qaabeynaa oo aan dib u dhignaa VPS, keydiyaa xogta aadan rabin inaad lumiso«. Haddii aan ku darno tan inay badanaa qiimo ahaan u dhigmaan ku dhowaad laba jibbaar sida VPS oo leh qalab iyo waxtar isku mid ah laakiin la adeegsanayo GNU / Linux, waxaa cad inay ka fiican tahay oo xikmad badan tahay in la doorto VPS oo leh GNU / Linux, maadaama aan yeelan doonno faa'iidooyin badan iyo xorriyadaha.
Haddii websaydhkaagu cusub yahay, oo haddii aad rabto inaad kaydiso xoogaa $ ah, waxaan kugula talinayaa inaad ka bilowdo WebHosting, ka dibna keliya haddii websaydhkaagu ku filnaado, waxaad iibsan kartaa VPS oo sidan oo kale waxaad ku heli doontaa xorriyad dheeraad ah iyo waxqabad wanaagsan .
Laakiin, su'aasha milyanka dollar ah ... Bixiyaha webhosting-ka keebaa kugula talinayaa?
Mareykanka (<° Linux) Waxaan ka iibsanay adeegyada WebHosting shirkad bilowgii, xaddiga xaddiga xaddidan, meel bannaan, oo si sax ah uma ahayn raqiis. Waxaan u sameynay khibrad la'aan, iyo hamiga aan u qabnay inaan ku daabacno goobta ... nasiib wanaag, waxaa naloo soo bandhigay fursad iyadoo gacan ka heleysa qaar ka mid ah asxaabta (haddii fursad ay u akhriyaan tan, way garan karaan cidda ay yihiin iyo sida aan ugu mahadnaqno) iyo beddel bixiyaha. Halkaas ayaan ka helnaa fikradaha fiican ee A2HostingSi kastaba ha noqotee, waxaan dooneynay inaan baaritaan dheeri ah sameyno, markii aan aragnay in taageeradooda ay dhab ahaantii ahayd mid cajiib ah (waxay taageeraan xitaa Twitter, cajiib ah), waxay u ogolaaneysaa HTTPS iyada oo aan loo baahneyn in la sameeyo lacag bixinno dheeri ah, meel disk aan xadidneyn, adeegsi xaddiga xaddidan, iyo sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan isku xirno SSH waxay u dirtay adeegeyaashooda, daqiiqadaas waxaan go aansanay inuu ahaa kan la doortay 🙂
Astaamaheeda kale waxaa ka mid ah suurtagalnimada xog-ururin aan xadidneyn, xisaabaadka FTP, xisaabaadka emaylka, iwm iwm ... aad ayaan ugu faraxsanahay, waxaas oo dhan waa qiimeyaal runtii laga adkaan karin, iyadoo kuxiran qorshaha aad rabto inaad iibsato, waxay ku kici kartaa $ 3 a bishii, $ 5, ama $ 7 bishii, waxayna leeyihiin ilo aan xadidneyn oo ka yimaada qorshaha ugu jaban.
~ »Ka hel adeegyada A2Hosting« ~
Sikastaba, waxaan rajeynayaa in fikradahan guud iyo fikradaha qaarkood ay caawiyaan qaar. Waxaan qoray maqaalkan anigoo ka fikiraya shakiga iyo xaaladaha aan nafteena ku qabnay bilowgii, marka hadii midkiin uu ubaahanyahay caawinaad, shaki qabo, su'aalo ... faallooyin uun uga tag iyaga, waanu kaa caawin doonaa 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Maxaan ka ogaan karnaa VPS iyo WebHostings GNU / Linux?
Booqashooyinka gaarka ah MA aha sida aragtida, tusaale ahaan tirakoobka WordPress tirada aragtiyaha ayaa muuqda, laakiin ma ahan tirada booqashooyinka gaarka ah
Run, laakiin sidee ku ogaaneysaa inta booqashooyin gaar ah oo aad qaadatay? Si kasta oo aynu xisaab u samayno, waa wax aan la ogaan karin si hubaal ah, kaalay, ayaan filayaa.
Dhinaca kale, marwalba waxaan u maleynayay in bixinta wax iska caadi ah, sida baloog, taasi run maahan, maxaa yeelay waxay had iyo jeer umuuqatay dibi dhac ... Si kasta oo ay Dirtyboss iyo sefsinalas isugu dayeen inay ii sharxaan , Waxba ma helo
Iyada oo la adeegsanayo waxyaabo isku mid ah WordPress, ama xog laga helay Google Analytics. Asal ahaan, haddii X IP uu galo goobta waa booqasho gaar ah, haddii isla IP-ga uu sii wado booqashada maqaalada, looma tirinayo booqashooyin gaar ah oo gaar ah, laakiin waxaa loo tiriyaa aragti ahaan. Sax fudud? 🙂
Samee degel ama baloog haddii aad taqaanno sida loo sameeyo, markaa waa inaadan bixin, maxaa yeelay waad ogtahay sidaad u abuuri lahayd naftaada, hadda, goobtaasi waa inay ku jirtaa adeegga 'X internet server', taasi waa waxa aad bixiso, halka laga helayo goobta / blog, yaa naga siinaya meel HDD ah, xagee ka imanayaa bandwidth ka si websaydhadeena loo booqdo, iwm.
Laakiin xitaa WordPress iyo Blogger tusaale ahaan waxay na siinayaan boos, wax yar laakiin waxay ku bixiyaan bilaash, taasi waa sababta aan u iri
Haa, laakiin maheli kartid emayl kuu gaar ah, ama boggaaga gaarka ah ... waxaad leedahay aqoonsi nus ah, u fiirso in haddii aan rabo balooggeyga http://kzkggaara.wordpress.com ahaa http://kzkggaara.com, Waa inaan ku bixiyo WordPress taas 😉
Maqaal aad u fiican. Horey ayaan u soo maray taas. Markii hore, waxaan qandaraas ka qaatay khibrad la aan aan ka helay adeeg bixiye adeegyadiisu qaali yihiin oo faa'iidooyinkiisuna ay kooban yihiin. Tan ugu xun: Windows server. Goor dambe, waxaan helay adeeg bixiye kafiican oo beddelay: qiimayaal fiican, taageero fiican, qaabab kafiican.
Hore ayaan wax uga weyddiiyay A2Hosting waxayna umuuqataa inaan saxsanahay: adeeg aad ufiican. Waxaan sidoo kale tixgeliyey u guurista VPS haddii degelkeygu korayo, in kastoo xilligan ay weli tahay "eey". Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka.
Farxad leh inaan ogaado inay caawinaad laheyd 😀
Dhibaatada VPS waa isku mid, qiimaha, sababtoo ah ugu yaraan annaga (<° Linux) ma awoodi karno tan, sida cajiibka ah ee ay umuuqato ...
Laakiin haddii aad miisaaniyad u leedahay VPS, iyo aqoon sare oo ku saabsan nidaamyada iyo shabakadaha, waxaad sameyn kartaa waxyaabo yaab leh vil
TuxInfo Magazine No. 41 oo diyaar u ah soo dejin